रोचक खबर – Page7– rastriyakhabar.com
एजेन्सी – तपाई सचेत हुँदा हुदै पनि कतिपय तपाईका जीवन शैली र आतदले तपाईको स्तनको स्वास्थमा गम्भीर अशर गरेको हुन सक्छ । तपाईको स्तनलाई सदा स्वस्थ र ठूलो आकारमा सजाई राख्न तपाईले तलका विषयमा ध्यान दिनुपर्छः लामो समयसम्म घोप्टो परेर नसुत्नुहोस लामो समय घोप्टो परेर सुत्दा तपाईको स्तननको आकारमा..
लुगा लगाउँदा ठूलो पेट कसरि लुकाउने ?
काठमाडौं । मोटोपन आधुनिक जीवनशैलीमा सबैको लागि समस्या बनिरहेको छ । सुन्दर देखिने प्रतिस्पर्धा बढिरहेको समयमा लुगा लगाउँदा मोटोपनले व्यक्तित्वमा असर गर्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ । तर, यदि लुगालाई मिलाएर लगाउन जानियो भने मोटोपनलाई पनि लुकाउन सकिन्छ। आजकल हाइवेस्ट लेगिङ्ग्स र जेगिङ्ग्सको चलन आएको छ ।..
शनिबार, असार २१, २०७६ मा प्रकाशित
यौन उत्तेजनामा आउने र विभिन्न चरणमा अघि बढ्दै जाने कुरा कतिपय बाह्य तथा आन्तरिक कुराहरूमा भर पर्छ । किन्सेले गरेको अध्ययनमा योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएको दुई मिनेटभित्रै ७५ प्रतिशत पुरुषले चरमसुख पाएको देखिएको थियो । पुरुषले योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएदेखि वीर्यस्खलनसम्मको समयलाई क्ष्लतचबखबनष्लब..
कोकाकोला खाएको १ घण्टापछि तपाईको शरीरमा के–के हुन्छ ?
सफ्ट ड्रिंक्ससँग जोडिएको एउटा समाचारले विश्वमा खलबली मच्याएको छ । ब्रिटेनका पूर्व फार्मास्टिक नीरज नाइकले आफ्नो एक ब्लगमा कोल्ड ड्रिंक्स खाएपछि शरीरको भित्र हुने प्रभावका बारेमा केही कुरा बाहिर ल्याएका छन् । उनले यस ब्लगमा कोकाकोला खाएकोडेली मेलका अनुसार नाइकले एक ग्राफिकका माध्यमबाट बताएका..
संसारकै खतरनाक यी ५ स्ट्याण्ड जुन हेर्दै मुटु काप्छ हेर्नुहोस भिडियोमासंसारकै खतरनाक यी ५ स्ट्याण्ड जुन हेर्दै मुटु काप्छ हेर्नुहोस भिडियोमा संसारकै खतरनाक यी ५ स्ट्याण्ड जुन हेर्दै मुटु काप्छ हेर्नुहोस भिडियोमासंसारकै खतरनाक यी ५ स्ट्याण्ड जुन हेर्दै मुटु काप्छ हेर्नुहोस भिडियोमासंसारकै..
गर्भवास्थामा नरिवल खाँदा गोरो बच्चा जन्मन्छ ?
बुधबार, जेष्ठ २२, २०७६ मा प्रकाशित
विज्ञानले जति प्रगति गरे पनि समाजमा परम्परादेखि विभिन्न खाले भ्रमहरुले जरा गाडिरेहेका छन् । दुरदराजका अशिक्षित व्यक्तिहरु मात्र होइन, शहरका आधुनिक मानिसहरुमा त्यस्तो भ्रम विद्यमान रहेको पाइन्छ । महिलाको गर्भावस्थालाई लिएर पनि धेरै खालका गलत अवधारणा नेपाली समाजमा छन् । कुनै वैज्ञानिक..
मङ्लबार, जेष्ठ १४, २०७६ मा प्रकाशित
यदि ज्योतिष शास्त्रलाई विश्वास गर्ने हो भने हामीले देखेका सपनाहरु हाम्रो भविष्यसँग जोडिएका हुन्छन् । हामीले देखेका सपनाहरुबाटै हामी निकट भविष्यमा हुने कामहरुको बारेमा जानकारी पाउन सक्छौँ । जीवनमन्त्रमा आज हामी १० बिशेष सपना र ति सपनाको फलका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । ढिलो हुनु या यातायातको साधन..
यी हुन् दुनियाकै लामो खुट्टा भएकी महिला
मङ्लबार, जेष्ठ ७, २०७६ मा प्रकाशित
कुनैबेला लामा खुट्टाका कारण अपहेलनाको सिकार हुनुपरेकी एक रसियन सुन्दरीले अन्ततः विश्वकै लामो खुट्टा भएकी महिलाको रुपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाएकी छिन् । रसियन मोडेल इकाटेरिना लिसिनाले यस्तो किर्तिमान राखेकी हुन् । ६ फिट ९ इन्च अग्ली मोडेल लिसिनाको नाउँमा विश्वकै अग्ली मोडेलको किर्तिमान यसअघि नै..
बादरहरुको चर्तिकला देख्न पाइने एउटा यस्तो ठाउ स्वयंभूनाथमा जे देखियो (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । स्वयंभूनाथ काठमाण्डू नगरको पश्चिममा एउटा उचाई भएको ठाउमा रहेको प्राचीन बौद्ध स्तूप हो। बौद्ध धर्ममा सम्लंग अनुयायी नेवारी मानिसहरुको दैनिक जीवनमा स्वयंभूनाथमा पुग्ने दर्शन गर्ने एक केन्द्रीय स्थान पनी हो स्वयंभूनाथ। यस पवित्र ठाउमा निकैनै देश विदेशमा आउने स्थानीय जन समुदाए लगायत..
आइतवार, बैशाख २२, २०७६ मा प्रकाशित
एजेन्सी। राशी अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको स्वभाव फरक फरक हुने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार प्रेम सम्बन्धमा तपाईको पार्टनरको राशि कुन भन्ने बारे खास ध्यान राख्नु पर्दछ। यदी पार्टनरको राशि तपाईको राशिसँग मिल्छ भने तपाईको प्रेम सम्बन्ध निकै राम्रो हुने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्र अनुसार..
बिश्वकै सबैभन्दा लामा खुट्टा भएकी यी मोडल बनिन भाइरल (तस्बिर सहित)
शुक्रबार, बैशाख २०, २०७६ मा प्रकाशित
एजेन्सी । २१ औँ शताब्दी अनौठा काम र रेर्कडको भकारीले भरीँदै जान थालेको छ ।दिनानुदिन नयाँ नयाँ र रोचक विषयबस्तु पत्ता लगाएर नयाँ नयाँ काम गर्ने र नाम कमाउन चाहानेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जान थालेको छ ।जसमध्ये तस्विरमा देखिएकी यि २० वर्षीया मोडल यतिबेला संसारभरी हिट बनेकी छिन् । चीनकी दोङ लेइ..
एजेन्सी - एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा १६.५ ग्यालोन आँसु झार्ने अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् । तर कहिलेकाँही मानिसहरु आफ्नो भावनालाई दबाउन खोज्छन्, यसलाई उजागर गर्न लजाउँछन् पनि । तर यदि भावनात्मक रुवाईले तपाईंलाई तौल घटाउन सहयोग गर्छ भन्दा कस्तो लाग्ला ? यो सुन्ने बित्तिकै कतिलाई लाग्न सक्छ कि आफूले..
विश्वकै सबैभन्दा अग्लो कुकुर , खान्छ लाखौँको खाना, यि मोडल हुन कुकुरकी मालिक्नी
एजेन्सी । तपाई हामीले देखेका कुकुरले १ वर्षमा कति पैसाको खान्की खाला रु इंग्ल्यान्डकी मोडल क्लेरी स्टोनम्यानले पालेको कुकुरले १ वर्षमा १६ लाखको खानेकुरा खाएको छ । ५ वर्षको फ्रेडी ७ फिट ५ दशमलव ५ इन्च अग्लो छ । विश्वकै अग्लो कुकुरको रूपमा गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा उसको नाम दर्ज भइसकेको छ । फ्रेडी..
रक्सी छर्केर घरभित्र पस्छन् स्थानीय चट्याङबाट बच्न
शुक्रबार, बैशाख १३, २०७६ मा प्रकाशित
पर्वत-जब आकाशमा कालो बादल मडारिन थाल्छ, अनि मेघगर्जन शुरु हुन्छ, तब यहाँको एक गाउँका बासिन्दा ज्यान जोगाउनका लागि हतारहतार घरभित्र पस्न थाल्छन् । वर्षेनी चट्याङका कारण मानवीय र पशु चौपायाको क्षति हुन थालेपछि पर्वतको महाशीला गाउँपालिका–६ फलामखानीका बासिन्दा त्रसित हुने गरेका छन् । बिहान, दिउँसो र..
एक छोरा जन्माएको झण्डै एक महिनापछि अर्को जुम्ल्याहा बच्चा
शनिबार, बैशाख ७, २०७६ मा प्रकाशित
ढाका, (एजेन्सी)बंगलादेशको एकजना महिलाले समय नपुग्दै एक छोरा जन्माएको झण्डै एक महिनापछि अर्को जुम्ल्याहा बच्चालाई जन्म दिएको डाक्टरहरूले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्। २० वर्षीया आरिफा सुल्तानाले फेब्रुअरीको उत्तराद्र्धमा पहिलो बच्चा जन्माएकी थिइन्। त्यसको २६ दिनपछि पुन पेट दुख्न थालेपछि उनलाई..